ဒီပုံမှာပါတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုငါတို့ပြောတော့မင်းတို့ပြက်လုံးတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိခဲ့တယ် - သတင်း
သငျသညျဖြစ်ကောင်းကဤ meme ကျည်လုပ်နေတာမြင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တက်တူးတွေ၊ ရှပ်အင်္ကျီတွေ၊ သိသာထင်ရှားတဲ့ခြေအိတ်တွေမရှိတာနဲ့အတူဒီပုံမှာပါတဲ့လူငယ်တွေဟာဗြိတိသျှထင်မြင်ချက် * ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။
ဟုတ်တယ်၊ သူကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနည်းနည်းရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် Winston Churchill ရုပ်ထုကိုခုခံတွန်းလှန်တာဟာအရမ်းဝေးလွန်းတယ်။ pic.twitter.com/Yl0jBWaFNK
- Pete Burns ၏သိမ်းဆည်းထားသောကုတ်အင်္ကျီ (@harrisonjbrock) ဇွန်လ 9, 2020
Churchill ၏ရုပ်ထုကိုရေးထိုးခြင်း၊ Peaky မျက်မမြင်များကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းသို့မဟုတ်အဓိကရုဏ်းသည်အလွန်ဝေးကွာသည်ဟုထင်မြင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည့်ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာပတ်ပတ်လည်၌မျောနေသည်ကိုသင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ကတော့ဒါကတကယ့်လူတွေရဲ့ပုံပဲ။ တိကျဖို့အတွက်ဘာမင်ဂမ်နှင့်ကူဗန်နီမှလေး ဦး လေး။ သူတို့ဟာမှားယွင်းတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကိုစကားပြောပြီးသူတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။
ပထမ ဦး စွာပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လဘာမင်ဂမ်၌ညအချိန်တွင်စတင်ခဲ့သည့်ရုပ်ပုံနောက်ကွယ်အခြေအနေမှန်အတွက်။ အဆိုပါအုပ်စုသည်ညဥ့်ရဲ့အစမှာနယူးလမ်းဘူတာပြင်ပကနေသူတို့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်, ပြီးတော့ Slug & ဆလတ်နှင့် Olivia ရဲ့ထွက်သွားလေ၏။
ယောက်ျားလေးများမှာ Connor Humpage၊ Kevin Rooney နှင့် Jamie Phillips တို့ဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်းရှိသူငယ်ချင်းကသူသည်ပိုမိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအလွဲသုံးစားမှုများ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖော်ထုတ်ခံရဖို့မလိုချင်ခဲ့ သူတို့ထဲကသုံးယောက်ဟာထုတ်လုပ်မှုမှာအလုပ်လုပ်ကြပြီး Connor ကတက်တူးထိုးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။
မျှဝေသည် Connor ဂျော်ဒန် Humpage 11:16 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 12, 2019 ရက်တွင် (@cj_humps_tattoos)
အဆိုပါ memes ၏တ ဦး တည်းဆန့်ကျင်သူတို့အစားဗော့ဒ်ကာ, ဂျက်ဒံယန်းများနှင့် lager သွားသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ညဥ့်အခါ WKD မသောက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ Olivia ရဲ့မှာသူတို့ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ Grey က Goose သုံးပုလင်းရှိခဲ့ပါဘူးပေမယ့်။ ငါကအတော်လေးကျပုံစံကြောင်းသိ, ကီဗင်ကပြောပါတယ်။
ညဥ့်နက်ပိုင်းတွင် Connor က Instagram ကိုတင်ခဲ့သည်။
မျှဝေသည် Connor ဂျော်ဒန် Humpage ဇူလိုင်လ (၆) ရက်၊ ညနေ (၁:၅၂) တွင် PDT တွင် (@cj_humps_tattoos)
ထိုအရပ်မှဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအကြိုက် ၅၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည်
ကီဗင်တွင်ဘရာဇီးနှင့်အမေရိကမှလူများကသူ့ကိုအဆက်မပြတ်စာပို့ကြသည်။ နေ့တိုင်းငါတစ်ခုခုအတွက် tagged လာပြီခဲ့သည်။ ဒါဟာရယ်စရာပါဟုသူကပြောသည်
မှတ်ချက်အချို့သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပါသည်။ ဒါဟာကံကောင်းတာကငါတို့ကိုမထိခိုက်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် '' ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် '' ကဲ့သို့မှတ်ချက်များ? နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလူငယ်တွေဟာသူတို့ဘာကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကဘာကြောင့်ပထမ ဦး ဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့သွားရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေးမိသည်။ ငါနေဆဲအဘယ်ကြောင့်ငါ့ခေါင်းကိုမရနိုင်, Connor ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်ရုပ်ပုံပါပဲ။
သူတို့ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလှောင်ပြောင်နေချိန်မှာအားလုံးကအားကစားခန်းမမှာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးသာမန်အဝတ်အစားတွေကိုသာဝတ်ဆင်ကြတယ်လို့ပြောကြသည်။ ကျနော်တို့မီးတောက်သို့မဟုတ် bootcuts ဝတ်ထားလျှင်, ငါတို့ piss piss ယူချင်ပါတယ် Connor ကပြောပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာလူကြိုက်များတဲ့ Facebook မှတ်ချက်အနည်းငယ်တောင်မှသူတို့အားလုံးဟာအလွန်ရယ်စရာကောင်းလှသည်။
ထို့နောက်၎င်းကိုမူလကယူပြီးတစ်နှစ်နီးပါးအကြာတွင် Black Lives Matter နှင့်ပတ်သက်သောဆိုးဝါးသောပြက်လုံးများနှင့်အတူပုံသည်ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်ပတ်အတွင်းတွင်၎င်းသည်တစ်ဖန်ပြန်ပေါ်လာသည်၊ သို့သော်အကြိမ် ၁၀ ခုရှိသည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည်နေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက် ၂၀ မှ ၃၀ ရရှိသည်ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။ ငါ့ကိုသင်တို့နှင့်အတူရိုးသားဖို့အတှကျဒါဟာအတော်လေးလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ခဲ့သည်။
ပိုဆိုးတာကသူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ memes ထဲမှာထင်ဟပ်နေတာကိုမမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်မှလျော့နည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေ။
AJ က Muhammad Ali ကိုတိုက်ခိုက် pic.twitter.com/UfjuBfM6rt
- ကော်မရှင်နာ (@BoxeoDeBlog) မေလ ၁၉ ရက်၊
မိုဟာမက်အလီကိုအန်တိုနီယိုယောရှုကတိုက်ခိုက်နိုင်ပါသလား။ ကီဗင်ကပြောသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောခေတ်ပါပဲ, ဂျေမီကပြောပါတယ် Peaky မျက်မမြင်များသည်? ကီဗင်ရဲ့ဘယ်တော့မှမ, ဂျေမီကလျောက်ပတ်သောထင်၏။
ထိုအခါစာတန်းထိုးဒီတစ်ခုရှိပါတယ်: ဟုတ်ပါတယ်သူကနည်းနည်းလူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ် Winston Churchill ရုပ်ထု defacing လွန်းဝေးမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူ tinder စကားပြောဆိုမှုစတင်
ဂျေမီသူတစ် ဦး အမြင်ရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့မသိရပါဘူးကပြောပါတယ်။ ကီဗင်က Colston ရုပ်တုကိုနှိမ့်ချလာအောင်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည် - ငါအားလုံးသည်ကျွန်စနစ်နှင့်ကိုလိုနီနယ်မြေများမှဆင်းသက်လာသောရုပ်ထုများအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Churchill တွင်မျဉ်းကြောင်းဆွဲသည်။
Churchill ၌သူသည်လူမျိုးရေးအမြင်များရှိသော်လည်းထိုစဉ်ကများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးလူမျိုးရေးခွဲခြားသူဟစ်တလာကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုသူကဆိုသည်။
သို့သျောလညျးကဒီဂျော့ခ်ျ Floyd meme ကသူတို့ကိုအများဆုံးအခက်အခဲဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဒါဟာမဖွင့်ပါ။ သင်၏မျက်နှာနှင့်ပတ်သက်လိုသည့်နောက်ဆုံးအရာမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်သည်ဟုဂျေမီကပြောကြားသည်။ ယောက်ျားလေးများအားလုံးကဤပုံသည်အားလပ်ရက်များ၌သူတို့ခဏတာတွေ့ဆုံခဲ့သောလူများထံမှပင်ဓါတ်ပုံများကိုတွေ့ခဲ့ပါသလားဟုမေးစရာများပြားစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ကခဏခဏဖြန့်ချိဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူတွေကိုစာတိုပေးပို့ခဲ့တယ်။
Connor အတွက်အခြေအနေအလွန်ဆိုးရွားခဲ့ပြီးသူသည် Instagram ကို meme မှဝေးကွာသွားစေခြင်းဖြင့်ရှည်လျားသော post တစ်ခုတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤ MEME သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိစေရန် CLARIFY သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
တကယ်တော့, တက်တူးအနုပညာရှင်အဖြစ်, Connor ဂျော့ခ်ျ Floyd ၏ပုံဆွဲအပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး ဒစ်လည်ချောင်းနက်ရှိုင်းဘယ်လို
ဒီဟာကသူ့ဟာသူပြောတာပဲ။ ယနေ့အထိငါ့အပါဆုံးအာဏာကိုဆွဲ။ ဂျော့ခ်ျ Floydplease ကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ပြုပါသည် #BLM #ripgeorgefloyd
မျှဝေသည် Connor ဂျော်ဒန် Humpage (@cj_humps_tattoos) 7:20 pm တွင် PDT တွင်ဇွန် ၁၀၊ 2020 တွင်
ရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်ထင်မြင်ချက်နှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ကိုပြုလုပ်ရန်ကော်နာအတွက်နောက်ဆုံးကောက်ရိုးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တရားကနေမဆိုထပ်မံမဖြစ်နိုင်သည့်လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်သာမန်ယောက်ျားပုံတူပါပဲ, သူကပြောပါတယ်။ ဒါဟာလူဖြူတွေပြောတဲ့စကားမပြောနိုင်တဲ့အရာတွေပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်, မည်သည့် meme ကြီးမားသောသွားသည့်အခါဟုတ်ပါတယ်, နောက်ကွယ်မှအမှန်တကယ်လူတစ် ဦး အမြဲရှိပါတယ်။ ကံမကောင်းဘရိုင်ယန်, အာရုံပြံ့လှငျ့ရည်းစား, ဒါမှမဟုတ် Target မှအဲလက်စ်င်အခါ, memes များသောအားဖြင့်မျှမျှတတညင်သာပျော့ပျောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီသင်ထင်ချင်ပါတယ်ထက်ယောက်ျားလေးများ '' ဘဝအပေါ်တစ်လမ်းပိုကြီးတဲ့သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်းပါတယ်။ ဂျေမီက၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလမ်းကြောင်းသို့ပြောဆိုသည်ဟုထင်မြင်သည်။
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမိုက်မဲသောပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်ဖော်ပြရန်ကြိုးစားနေသည်၊ သူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအထူအသံစေရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒါဟာကျနော့်အမြင်အတွက် Love Island နှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးပါပဲ။ လူတွေသူတို့အဲဒီမှာအပေါ်နေသည့်အခါအဖြစ်အတော်လေးမိုက်မဲကိုဖြတ်ပြီးလာ။ , ငါတို့ကြည့်မျိုးရှိသည်။
သူကသူတို့ထဲကသုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ကြောင်းထောက်ပြ: ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းစွာလစာအလုပ်အကိုင်များရရှိပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ရယ်မော။ ဒါဟာကျနော်တို့ကအရမ်းမိုက်မဲဖြစ်ရိပ်မိခံရကြောင်းအတော်လေးရယ်စရာပါပဲ။
Connor အတွက်ကတော့ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုများကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံကိုအလံလွှင့်တင်ရန်သူ့ကိုစာပို့သူများသည်နောက်ဆုံးတွင်တက်တူးထိုးရန်တောင်းဆိုကြသည်။
သငျသညျငါတို့အဝတ်ထဲက piss ယူလျှင်, fuck ဆိုတဲ့အပေါ် crack, ဂျေမီကပြောပါတယ်။ ငါလူတွေကိုကျနော်တို့လူမျိုးရေးခွဲခြားနေစဉ်းစားရန်လုံလောက်သောနုံမဟုတ်ထင်ပါတယ်။
•သီးသန့် - Bristol ရှိ Colston ရုပ်တုကိုဖြိုချသူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောခဲ့သည်
• ကြောင် meme မှာအော်သောမိန်းမနောက်ကွယ်မှဇာတ်လမ်းကတကယ်မှောင်မိုက်နေပြီ
• ပြောင်သောလူသား meme နောက်ကွယ်မှဖြစ်ရပ်မှန်မှာအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်